သူငယ်ချင်းညီမ – CHAR TAKE
27/08/2021char take0 Comments
ကျွန်တော့်နာမည်က စည်သူ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ထဲက အရမ်းခင်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ လည်းရှိမှာပဲ။ ဒီကောင့်ကို အကုန်လုံးက လေအိုးလို့ ခေါ်ကြတာ။ လေအရမ်းပေါ တဲ့ကောင်။ နာမည်အရင်းက ထွဋ်ခေါင်ဆိုပဲ။ အဲ့နာမည် ဘယ်သူမှ မခေါ်ပေါင်ဗျာ။ လေအိုးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့စသိတော့ ၃တန်းဗျ။ ကလေးဘ၀ ကျောင်းမှာ ဘောလုံးကန်ရင်း သိတာ။ ငယ်ငယ်ထဲက ကျွန်တော်က လူလည်ကျတာ။ ဒီကောင်တွေအမြဲ ရှေ့တန်းတို့နောက်တန်းတို့လုနေရင် ဂိုးဖမ်းရင် ကျွန်တော်ပဲ။ လေအိုးက ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုးကြီး အသေဖြစ်ချင်တာ။
အဲ့နေ့က ရှေ့တန်းသူသွားမယ် ငါသွားမယ်လုနေတုန်း။ကျွန်တော်က လေအိုးကို ရှေ့တန်းပေးဖို့ ပြိုင်ငြင်းပေးလိုက်တာ လေအိုးရှေ့ တန်းဖြစ်ကော။ မဖြစ်လည်းမရဘူးလေ။ ဂိုးသမားမရှိရင် ဘောလုံးကန်မရဘူးမလား။ ဂိုးဖမ်းမယ့်သူက ခပ်ရှားရှားရယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းဆင်းတော့ လေအိုးက ကျနော့်ကို မုန့်ဝယ်ကျွေးတယ်။ သူ့ဖက် ၀င်ငြင်းပေးလို့ပေါ့။ အဲ့ထဲက ခင်လာခဲ့တာ အသက် ၃၀ ကျော် ကိုယ်စီအလုပ်တွေအကိုင်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အထိပဲ။ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ကျတော့လည်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်။ ဒီကောင်က ၁၁လပိုင်း။ ကျွန်တော်က ၁၂ လပိုင်း။ ကျွန်တေ်ာတို့မိန်းမတွေလည်းနောက်တော့ ခင်သွားကြတာပဲ။ လေအိုးနဲ့ ကျွန်တော်က အရမ်းခင်တာကိုး။ တတွဲတွဲနဲ့နေကြတာ ခုခေတ်ဆို swing တယ်လို့တောင်ထင်ကြမှာ။ တစ်ယောက်ငွေလို တစ်ယောက်ချေး၊ တစ် ယောက် စီးပွားရေး တစ်ယောက်ကူညီနဲ့ အပြန်အလှန်ပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေကြားဝင်လာတာက ကျွန်တော်တို့ မိန်းမတွေမဟုတ်ဘူး။ လေအိုးညီမ ပေါက်စ။ ဟုတ်တယ်။ သူ့နာမည်ကိုက ပေါက်စ ။ ကျွန်တော်တို့ထက်အသက် ၁၀နှစ်လောက်ကွာတယ် ။ လေအိုးကော ကျွန်တော်ကောသူ့ကို ပေါက်စလို့ပဲခေါ်တာ။ ချွဲတာကလည်း ၂ကောင်လုံးကို အသေချွဲတာ။ ဆိုးလည်းဆိုးတယ် နိုင်လည်းနိုင်တယ်။ အလို လိုက်တာဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ ၂ ကောင်ပဲရှိတာကိုး။ လေအိုးတို့အိမ်က အရမ်းတင်းကြပ်တာ။ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာက သင်္ကြန်တွင်းကြီးဖြစ်တာ။ အဲ့နှစ်သင်္ကြန်တုန်းက လေအိုးကသူ့ရဲ့ လိုက်ထရပ်လေးကို သင်္ကြန်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ထလုပ်ကော။ သူ့မိန်းမက လည်းလေအိုးရဲ့ ပိုးကိုမနိုင်တော့ထွက်ပေါ့ သူလည်းလိုက်မယ်လေတဲ့။ လင်မယား၂ယောက်လုံးက လိုက်မယ်ဆိုတော့။ ဒီကောင့်ညီမ ပေါက်စကလည်း လိုက်မယ် တကဲကဲ။
သူ့အဖေနဲ့အမေက သင်္ကြန်ဆိုတာနဲ့တရားစခန်းပဲဝင်ခိုင်းတာဟိုး ကလေးဘ၀ထဲက။ အခု အသက် ၂၀ကျော်တောင် တရားစခန်းလွှတ်နေတုန်း။ ပေါက်စကလည်း သူ့အထာနဲ့သူ။ သူ့ဘဲနဲ့ သူပတ်လည်ဖို့ လေအိုးကိုအကြောင်းပြတာ။ လေအိုးက ညီမကိုတော့ချစ်ပါရဲ့ ။ မိဘ၂ ပါးထောင်းမယ့်ဒဏ်ကိုပိုကြောက်တယ်လေ။ ဒီတော့ မနိုင်မယ့်အတူတူ ပေါက်စကို မခေါ်ချင်ဘူး။ ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျုပ်အိမ်ရောက် ချလာပါကော ။ မိန်းမရှေ့မှာ မဲ့ကာ ရွဲ့ကာ တမျိုး ငိုလိုက်ရီလိုက်တမျိုး ချွဲနေတော့ မိန်းမကလည်း အမြင်ကတ်လာပုံရတယ်။” နင်သာလိုက်သွားလိုက်အေ။ တကတည်း သူ့အိမ်ကလည်းလွန်ပါတယ်။ အပျိုကြီးတောင်ဖြစ်တော့မယ် ခုထိ သင်္ကြန်မလည်ခိုင်းဘူး” ဟူပြီး ရွဲ့ပြောသည်။
ကိုယ့်မိန်းစကား ကိုယ်နားလည်သောကြောင့် သေချာအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြရတာပေါ့။ ” ဟဲ့မိန်းမ။ နင်မသိဘူးနော။ဒီပေါက်စမက သူ့ဘဲနဲ့သူလည်ချင်လို့ သက်သက် ဂွင်ဆင်နေတာ” ဟ မိန်းမကိုပြန်ပြောရင်း ပေါက်စခေါင်းကိုဒေါက်ခနဲခေါက်တော့ ပေါက်စက နှုတ်သီးစူသွားသည်။ မတတ်နိုင် .. ကိုယ့်မိန်းမရှေ့တော့ အနိုင်ပေးလို့မရ ။ နို့မဟုတ် ဒီကောင်မလေး လုပ်ပုံနဲ့ ညစာငတ် ဖို့များသည်။ ” ဒါများဟယ် သူ့ဘဲ မလိုက်ခိုင်းနဲ့ပေါ့။တို့လင်မယား၂ယောက်ထိန်းမယ်လေ။ သူ့အိမ်ကို နင်လိုက်ပြောရင်ရပါတယ်။ ”
မိန်းမဖြစ်သူ၏ စကားကြောင့် စူနေသော နှုတ်သီးက မဲ့သွားသည်။ သူ့အတတ် သူစူးပြီလေ။ ပေါက်စ မဲ့သွားတာမြင်တော့ကျုပ်လည်း မိန်းမအကြံပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။လမ်းမှာတစ်ခွန်းမှ စကားမပြော။ ပွစိ ပွစိနှင့်ဘာတွေ ကျိန်ဆဲနေလဲမသိ။ ကိုယ်သာ စပ်ဖြီးဖြီး။ လေအိုးအိမ်ကလည်းတစ်ကားလုံးက သူငယ်ချင်းတွေ လင်မယားတွေဆိုတော့တစ်ရက်တော့ပေးလွှတ်သည်။ ဒါတောင် မနည်းတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောရတာ။
“မောင်စည်သူမင်းပါလို့လွှတ်တာနော်။မင်းသူငယ်ချင်းလေအိုးသာဆိုလို့ကတော့ မယုံရဲဘူး။ ဒီကောင်က သူ့မိန်းမနဲ့သူ အလုပ်ရှုပ် နေမှာ။ ” ” ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ ဒီပေါက်စကို ခေါင်းခန်းထဲထည့်ထားလိုက်လေ။ အဲ့တာဆိုအေးဆေးပေါ့။ “”အေး အေး အဲ့အကြံကောင်းတယ်။ သမီးမိန်းကလေးဆိုတာ . .. …..” ထုံးစံအတိုင်း သြ၀ါဒတွေခြွေလာတော့ မကြားချင်ယောင်ဆောင်တုန်း ကျနော့်ကို ဒိုင်းခနဲ ပေါက်စက မျက်စောင်းလှမ်းထိုး ပါတော့သည်။
လည်တဲ့နေ့ရောက်တော့ ခေါင်းခန်းထဲက လင်မယားရယ် ပေါက်စရယ်။ ပေါက်စတို့ သင်္ကြန်လည်တာများ ဟာသကိုဖြစ်လို့။ ထမိန်ရယ်shirt အကျီကြီးရယ် အပေါ်က အနွေးထည်ကြီးဝတ်ထားသေး။ ကားမထွက်ခင် ပြောတာများ ၁ နာရီလောက်ရှိတယ်။ ကားနောက်ခန်းက ကျွန်တော်မိန်းမက ခေါင်းဖက်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ အနောက်အစွန်ကနေ ကလေးတွေကိုထိန်းရတာပေါ့။ လည်တာမှ ကမ္ဘာအေး မရောက်သေး။ ကားက ထိုးရပ်သွားပြီး ဇောင့်ဇောင့်နဲ့ပေါက်စမ ခေါင်းခန်းက ဆင်းချလာသည်။ မျက်နှာကတော့ စပ်ဖြီးဖြီး။ အနွေးထည်လဲမရှိတော့။ shirtနဲ့ ထမီနဲ့။ကားဘေးမှာ ပဲနဲ့ လျောက်နေတုန်းတခြားကားတစ်စီးက ဗွမ်းခနဲပက်ချလိုက်တာ တစ်ကိုယ်လုံးရွှဲသွားပါလေရော။ဒီတော့မှ တစ်သက်လုံးကလေးလို့ထင်ထားတဲ့ ချာတိတ်မရဲ့ အလှတွေထင်းခနဲ။ ကိုယ့်မျက်စိဟာလည်း ၀င်းခနဲ။အိုမဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီး အရှေ့ကမိန်းမဆီပို့ရတယ။် ဒီနောက်က ကောင်တွေနဲ့ဆို အိမ်ပြန်ရင် ထဘီတောင်ကျန်မယ်မထင်။
ကားနောက်ခန်းက ကျွန်တော်ကလည်း ကလေးတွေမျက်နှာလုပ်တဲ့ ဘီယာတွေ တဗူးပြီးတဗူးကစ်တာပဲ။ ခါးကြားထဲက ၈ပတ်ပြားလေးနဲ့ တင်ရတာပေါ့။ရေလေးစိုလိုက် ကစ်လိုက်နဲ့ ကမ္ဘာအေးရောက်တော့ ကားက ထုံးစံအတိုင်းကြပ်သည်လေ။ လူငယ်တွေ၎ယောက်လောက်ပါတော့ ဆင်းမလျောက်ခိုင်း။ဒီတိုင်း အိပဲ့အိပဲ့နဲ့တိုး နေတာ။ပေါက်စမကိုကြည့်တော့ အအေးဗူးက တစ်ဝက်တောင်ကုန်နေပီ။အရှေ့ပြေးရင်းအအေးဗူးယူမော့ကြည့်တော့အံမာရောထားတာဗျား။ ဆူလည်းဆူချင်တယ် အနောက်က ကောင်တွေကသူ့ထက်ပိုကဲနေတော့ ခေါင်း၂ချက်လောက်ခေါက်ပြီး နဂိုနေရာပြန်ထိုင်ရတယ်။ မဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီး ကားရှေ့ပြန်သွားပြီး မိန်းမကိုလည်း ပေးမသောက်ဖို့ သတိပေးတောမှ ကိုယ့်မိန်းမကပါ အပျိုလုပ် နေတာ။သူကစ်ထားတာ ပေါက်စထက်များပုံရတယ်။တဟီဟီ နဲ့။ လခွီးပါကွာလို့ရေရွတ်ရင်း လူငယ်တွေထဲက ထိန်းနိုင်တဲ့ကောင်ကိုပဲ ရန်မဖြစ်အောင်ထိန်းဖို့ ပြောရင်း ကိုယ့်ကောင်၂ကောင် ကိုယ်ပြန်ထိန်းနေရတယ်။
ပေါက်စမကနည်းနည်းရယ်”ဟေး ချစ်..ဘာလုပ်နေလည်း ဘာညာ “နဲ့လင်ထောင်နေတာ ကိုယ့်မိန်းမ။ မူးတာကနည်းနည်း ယွတာကများများ။ခုချိန်ပြောလည်း နိုင်မှာမဟုတ်တော့။ ပေါက်စကြည့်တော့လည်း ချာတိတ်က ပြုံးစိစိ။ ကန်တော်ကြီးရောက်တော့ ဆုံရပ်ကိုပြောပြီးလမ်းဆင်းလျောက်ကြတယ်။မဏ္ဍပ်တွေရှေ့ေ၇ာက်ရင် ၀င်ကတဲ့ ကောင်ကိုလည်း ထိန်း။ ယိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်မိန်းမကိုလဲတွဲ နဲ့ ပေါက်စတောင်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အဲ့အချိန်လေးမှာပဲ ၀ှစ်ခနဲဘယ်လစ်သွားတယ်မသိ။ မယ်မင်းကြီးမက ပျောက်သွားးပါလေကော။
အဲ့တော့မှ ခေါင်းမီးတောက်တာ။ ခုနက ကစ်ထားတဲ့၈ပတ်ပြားလည်း ဘယ်နံကြားရောက်မှန်းမသိတော့။ခေါင်းဆင်နင်းတယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ။ ကိုယ့်မိန်းမကို သူငယ်တွေကြားထဲ ထားခဲ့ ရမှာလည်းစိတ်ကမချနိုင်။ မတတ်သာတဲ့အဆုံး ကိုယ့်မိန်းမကိုတွဲဖို့ ကောင်လေး၂ ကောင်လက်ထဲထည့်ပြီး သကောင့်သားမကိုရှာဖို့ထွက်ရပါလေကော။ အဲ့နှစ်က IC showရှိတယ်။ အကုန် IC show ဒိုးကြတာပေါ့။ တွေ့ချင်တော့ချာတိတ်မကို အိမ်သာရှေ့မှာ ယောင်လည်လည်နဲ့တွေ့တယ်။
ခုနက သမဖို့ပြင်ထားတာနည်းနည်းတော့လျော့သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ကိုပြေးဆွဲပြီး ဒေါက်ခနဲခေါက်ဖြစ်အောင်ခေါက်လိုက်သေးတယ်။ပါးစပ်ကလည်းဆူတာပေါ့။ ပြောတာများတန်းကို စီနေတာ ။ ဂန်းနာမလေးက ဒါတောင်စပ်ဖြီးဖြီနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ရင်း။”ဘာတွေစိတ်ပူနေတာတုန်း ကလေးမှမဟုတ်တေ့ာကို။ ခိ” ဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်။”ဟေ”လို့သာဖြေနိုင်တယ်။ “ဟုတ်တယ်လေ.. ကိုလေးတို့က ပေါက်စဆို အမြဲ ကလေးလို့ထင်နေတာမလားဘာလဲ ရေစိုမှ လူကြီးမှန်းသိတာလား” ဟူသည့် ပေါက်စ၏စကားကမှန်လွန်းလို့ ခနတောင် ဆွံ့အသွားသည်။ ဟန်ကိုယ်ဖို့ဆိုသလို “နင်လျာမရှည်နဲ့ နင်ပျောက်သွားရင် ငါသေမှာမလို့။ နင့်ဘာမှစိတ်မပူဘူး ။ အပိုတွေပြောမနေနဲ့လာ။”ဟုဆိုကာ လက်ကိုဆွဲရင်း ခေါ်လာတော့လည်း မငြင်းသည့်အပြင် ပြောသေးတာက
“ဟီ..ကိုလေးနဲ့ ပေါက်စက ခုကျတော့လည်း ရန်ဖြစ်ထားတဲ့ စုံတွဲ တွေကျနေတာပဲ ဟဲဟဲ” ရယ်ပုံကိုက လူယုတ်မာအသံနဲ့ရယ်တာ ။ ” .. .. ..” ဘာမှပြန်မပြောပဲ လက်ကို အတင်းဆွဲကာ ခေါ်လာရင်း သူက ဖက်ခနဲဆို ခါးကို ဖက်ကာ “ကိုလေး..နေပါဦး ခန နားထောင်” ဟုဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုဆွဲလှည့်သသည်။ ရုတ်တရက် ဆိုတော့ကြောင်သွားရင်း ဘာဆက်ပြောမလဲ နားထောင် မိတာပေါ့။”ပေါက်စကို မိန်းကလေးလို့ကိုမထင်တာလား” “ဟာ..မိန်းကလေးမလို့ စိုးရိမ်တာပေါ့ဟ” “ကိုလေး စိုးရိမ်တာသိပါတယ်။ အဲ့တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပေါက်စကို ကိုလေး မိန်းမ အပေါ်မြင်သလိုမမြင်ဘူးလား”နွယ်ပြီလေ။ ” ဒါ..ဒါက..” ” ကိုလေး..မလိမ်ပါနဲ့နော်. ပေါက်စကို ဒီနေ့ကိုလေးကြည့်တာတွေမရိုးသားဘူးအမှန်တိုင်းဖြေ ” “အာ.. ကြည့်တာက အေ်ာ ဒီကလေးမ အရွယ်ရောက်လာပါလားဆိုပြီးပဲကြည့်တာပါ။ နင်က ငါ့ညီမအရင်းလိုပါပဲ။တခြားမတွေးနဲ့”
” အ ပို တွေ ” “….” “ကိုလေးဟာလေ… အ ဖြစ်ကို မ၇ှိဘူး”ပေါက်စ၏ မှတ်ချက်ကြောင့် ဒေါသက ဒိုင်းခနဲထွက်သွားပြီး ပါးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ ပြွတ်ခနဲ နှုတ်ခမ်းကိုဆွဲနမ်းလိုက်မိသည်။”….” ” ….. “၂ယောက်လုံး ခနကြောင်သွားတာပေါ့။ နောက်တော့ လက်ကိုဆွဲပြီး လမ်းလျောက်လာရင်း သူ(မ)က ခါးကိုလှမ်းဖက်တော့ကျွန်တော် မရွေ့နိုင်။ မလှုပ်နိုင်။ ဆူညံနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့၂ယောက်က တိတ်ဆိတ်ညင်သာလှသည်။ဟုတ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်လုံးနားလည်တယ်လေ။ ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာ။ ဒါမူးတုန်းဖြစ်မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်သာသာ။ အချိန်တန်ရင်မေ့သွားမှာ..။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကားပေါ်ပြန်ရောက် လည်ကြပတ်ကြနဲ့ အကျနေ့တစ်ရက် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ နောက်နေ့ကျတော့ မလှုပ်နိုင်။
ကိုယ်တင်မဟုတ်..ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်မိန်းမ အပူတွေကြီးပြီးဖျားပါလေရော။ ဆေးလေးတိုက် နွေးနွေးထွေးထွေးထားပြီး။ ပေါက်စတို့ အိမ်ကို လာတော့လည်း ပေါက်စမ လည်းဖျားသည်။ သူ့အကိုလင်မယားကတော့ ကားဖြင့်ထွက်သွားပြီ။ အိမ်မှာအဘိုးကြီးနဲ့ အဘွားကြီးပဲရှိတယ်။ ပေါက်စနေမကောင်းဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းတရား စခန်းမသွားကြ။ ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့မှဘွားတော်က တရားနာလေးအမှီ သွားပါဦးမယ်ဆိုပြီး ဘိုးတော်နဲ့ ကျွန်တေ်ာ့ကို လူနာစောင့်ခိုင်းခဲ့သည်။ ဘိုးတော်ကလည်း လေပစ်ချက်တွေက နိုင်းလောက်ရှိတယ်။ တောက်လျောက် ပစ်နေတာ။ လူနာဝင်ကြည့်ဖို့ပြောတော့ ဘိုးတော်ကလည်း ဆေးယူကာလိုက်ခဲ့သည်။ ချမ်းနေတာမှတုန်လို့။ မနေ့က မကဲစဖူး ကဲလိုက်တာ ဒီနေ့ တုတ်တုတ်မလှုပ်။ပေါက်စကို နှိုးရင်းဆေးတိုက်တော့ ဆေးသောက်ရင်းတောင် ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ စောက်ခွက်က ပြုံးစိစိ။ ပြီးတော့
“ဖေကြီးရေ အမေလှမ်းထားတဲ့အ၀တ်တွေရုတ်ရဦးမယ်ထင်တယ်။ အပေါ်ထပ်မှာ.. ကိုလေးကိုခေါ်သွားလိုက်ဦး””ဟ.. ဟုတ်သားပဲ။ နေနေ မောင်စည်သူ။ ဧည့်သည်ကိုခိုင်းလို့ဖြစ်ပါ့မလား။ပြီးတော့ထဘီတွေလည်းပါတာကို” “အာ.ဦးလေးကလည်း..ရပါတယ်။” ” ရပါတယ်မလုပ်နဲ့။မင်းညီမက ဘယ်ထပြေးမလဲမသိဘူး။ သေချာကြည့်ထား” ” ဟုတ် ကဲ့ ဦးလေး။” ဘိုးတော်ပြောတာ လည်းဟုတ်သည်။ ဒီကလေးမ ဘာကြံနေလဲဆိုတာမသိ။ အခန်းဝက ထိုင်စောင့်ရင်း မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေရသည်။
ဘိုးတော်အပေါ်တက်သွားတော့ ပေါက်စက ဗြုန်းခနဲထကာ ကျနော့်ကို သိုင်းဖက်၏။ ” ကိုလေးရာ လွမ်းလိုက်တာ။..” “ဟဲ့..ဟဲ့ အဘမြင်သွားရင်မကေင်းဘူး” အတင်းတွန်းချသော်လည်းမရ။”ဟဲဟဲ လန့်လို့လား။မလန့်ပါနဲ့” ဟုပြောရင်း သူ(မ) ကုတင်ပေါ်ပြန်တက်သွားသည်။ ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ပုံက အသည်းယားစရာ။ စောင်ကိုရင် ဘတ်အထိခြုံ၇င်းနဲ့ ၀ှစ်ခနဲဆိုသလို သူ(မ)၏ အကျီကို ချွတ်ပြီး လက်ဖြင့် ယမ်းပြသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် ဘိုးတော်က အောက်ဆင်းလာပြီ။ ဘိုးတော်အသံကြားတော့ အကျီင်္ကိုစောင်ခြုံထဲထည့်ရင်း ကျွန်တော့်ကို လျာထုတ်ပြသည်။ နိုင်လည်းမနိုင်တဲ့ကလေးမ။ “ဖေကြီးရေ…ဖေကြီး လာပါဦး” ဘာကြံနေပြန်ပြီမသိ။ “အေး ပြော…ဘာဖြစ်လို့တုန်း”ပေါက်စ၏ အသည်းအသန်ခေါ်သံကြောင့် ဘိုးတော်ပြာပြာသလဲဖြစ်သွားသည်။”သမီးဗိုက်ဆာတယ်။ မနက်ထဲကဘာမှမစားရသေးဘူး” ” နင်အပိုတွေမပြောနဲ့ မနက်ကတင် နင်ဆန်ပြုတ်သောက်ပြီးပြီလေ ”
“သိဘူးဆာတယ်။ ခုနကတင်ဆေးသောက်ထားတာ ။သမီးကိုဘာမှလည်းမကျွေးဘူး။ ဗိုက်ဆာတယ်။ဗိုက်ဆာတယ်” “အေးပါ.ဟာ ..။သမီးတစ်ကောင်အရွယ်ရောက်နေပြီ ခုထိ အကုန်ခိုင်းတုန်း” “မောင်စည်သူ။ ခနကြည့်ထား။ မနက်တောင် အဘဆန်ပြုတ်ပြုတ်တုန်း သူလမ်းထိပ်မှာရေသွားဆော့နေတာ ပြန်ခေါ်ရတယ်။” ” ဟုတ်ကဲ့ အဘ..။””နေကလည်းကောင်းတာ မဟုတ်.. ရွပိုးကလည်း ခုထိမသေသေးဘူး “ဘိုးတော် ပွစိပွစိနှင့် မီးဖိုချောင်ထဲဝင်သွားတာကြည့်ရင်း ဟူးခနဲ သက်ပြင်းချမိသည်။ ပေါက်စကိုပြန်ကြည့်မိတော့ သူ(မ)ပင်တီကိုခုနကလို ယမ်းပြနေသည်။
ကိုယ်လည်းသည်းမခံနိုင်တော့ ကိလေသာကုန်နေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ ။ ရုတ်တရက်ထပြီး စောင်ကိုဆွဲလှန် လိုက်တော့။ တစ်ကိုယ်လုံးက မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း။ ပစ္စည်းက ဒင်ခနဲ ထလာသည်။ ပေါင်နှစ်လုံးကြား ခေါင်းပြေးဝင်ကာ အားပါးတရကုန်းယက်လိုက်ပါတော့သည်။ တပြက်ပြက်မြည်နေသံက အခန်းဝကပင် ကြားနိုင်သည်။ ပေါက်စအဖုတ်က အရည်တွေနဲ့ကျွန်တော့်တံတွေး တွေရောကာ ရွှဲအိုင်နေပါလေရော။ ထိုစဉ် “ဟဲ့..ကြက်ဥလား ကြက်သား” ဟူသည့် အသံကြောင့် ၂ကောင်သားတွန့်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ခနရပ်သွားသော ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ဖိချရင်း သူ(မ)က “ကြက်သားအဘရေ ကြက်သား” ဟု လှမ်းအော်ရင်းဖြေသည်။
ထိုစဉ် ကျွန်တော်အကြံ တစ်ခုလင်းခနဲရသည်။ ဟုတ်ပြီ။ ဒီတိုင်းလုပ်ရမယ်။ ရုတ်ခနဲ ထကာ။ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားတော့ သူ(မ) ကြောင်သွားသည်။ ကျွန်တော်ပြူတင်းပေါက် တံခါးကို လက်ညှိုးထုိးပြရင်း မျက်စိမှိတ်ပြတော့ သူက လည်းဒက်သည်။ ချက် ချင်းခေါင်းညိတ်ပြသည်။ မီးဖိုချောင်ထဲက ဘိုးတော်ကိုလှမ်းချက်တော့ ပန်ကန်ထဲတောင် ခေါက်ဆွဲကိုထည့်နေပီ။ ဒီတော့မှ.. “အဘရေ..ကျွန်တေ်ာပြန်ပြီနော်။ တံခါးစေ့ခဲ့မယ်”ဟု လှမ်းအော်ရင်း ခြံထဲဝင်ကာ သူ(မ) အခန်းပြူးတင်းပေါက်နားထိုင်နေမိသည်။
“အေးအေး…” ဟုသာပြန်ဖြေနိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်လေ ခေါက်ဆွဲထည့်ရင်းတန်းလန်းဆိုတော့ နှုတ်တောင်မဆက်လိုက်ရ။ ဘိုးတော်က ပေါက်စကိုေ ခါက်ဆွဲချပေးရင်း အခန်းဝထိုင်စောင့်နေသဖြင့် “ဖေကြီး ဘာထိုင်ကြည့်နေတာလဲ ခြံတံခါးသွားပိတ်ဦးလေ။”ဟု ပေါက်စအပြောကြောင့် “အေးအေးဟုတ်သားဟ။နင်ဘယ်မှလျောက်မသွားနဲ့နော်။”ဟုဆိုကာ ထွက်သွားတော့ သူကပြူတင်းပေါက်ထဖွင့်သည်။ဒီတော့မှ ခွဝင်ရင်း ပြူတင်းပေါက်ကိုပြန်စေ့။နှုတ်ခမ်းကို တရစပ်နမ်းမိသည်။ ဘာမှဝတ်မထားသောသူမတစ်ကိုယ်လုံးကို ကိုယ်တွယ်ကစားရင်း တံခါးမကြီး ဂျက်ထိုးလိုက်သည်။ ပေါက်စမပေါင်ကိုဖြဲပြီးလီးကိုကိုင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် ဒုန်းဒုန်းဆို တံခါးကို တွန်းသံကြားရသည်။
“ဟဲ့ပေါက်စ။ဟဲ့ပေါက်စ။အာ…ပြူတင်းပေါက်က ထွက်သွားပြီလားမသိပြန်ဘူးကွာ”ဘိုးတော် ခြံထဲပြေးဆင်းသွားတာ့ ကျွန်တော်တို့၂ ယောက်ပြူတင်းတံခါးဖွင့်ပြီး ကုတင်ဘေးပုန်းနေတာပေါ့။ပြူတင်းတံခါးပွင့်နေတာတွေ့တော့ ဘိုးတော်လည်း အသည်းအသန် နောက်ဖေးကော ခြံတံခါးကောလိုက်စစ်နေသည်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော်က သူ့နားနား ကပ်ပြီးပြောသည်။ သူကလည်းလက်ခံသည်လေ။
“ဖေကြီးရေ..သမီးဒီမှာ..”ခြံနောက်ရောက်နေသော ဘိုးတော်ကို ပြူတင်းပေါက်ကလှမ်းအော်သည်။”ဟဲ့ နင်ဘယ်သွား..” ” ဟီး.. သမီးဒီမှာပုန်းနေတာပါ။ နေဒီလောက်ပူနေတာ ဒီနေ့မဆော့ပါဘူး။အခန်းရှေ့လည်ထိုင်စောင့်မနေနဲ့ဒါပဲ”ဟုပြောပြီး ပြူတင်းတံခါးကို ချက်ပြန်ထိုးကာ လှည့်အလာအသင့်စောင့်နေသော ကျွန်တော့်က ပေါက်စမကိုချီပြီး ပြူတင်းပေါက်ပေါ်မှီကာ လိုးဖို့ကြံသည်။ ခြေသံ တရှပ်ရှပ်ကိုကြားတော့ဘာမှဆက်မလုပ်ဖြင့်။ ဘိုးတော်က ပြူတင်းတံခါးကို ထုရင်း “အေး ထွက်ရဲထွက်ကြည့် ဒီညနင်ပြန်လာဖို့မတွေးနဲ့။ အသေပဲ” ဟု ဓါးကြိမ်းကြိမ်းကာ ဒေါသတကြီး ဧည့်ခန်းထဲပြန်ဝင်သွားပါတော့သည်။ ဧည့်ခန်းနဲ့ ပေါက်စအခန်းက နည်းနည်းသာလှမ်းသည်။ ပေါက်စအခန်း တံခါးကို လှမ်းမြင်နေရသည်လေ။ ကံဆိုးရှာသော ဘိုးတော်မှာ အခန်းတံခါးကိုသာမြင်ရသည်။
အခန်းထဲတွင် လေးဖက်ထောက်ကာ အလိုးခံနေရသည့် သမီးဖြစ်သူကိုမမြင်နိုင်။ ပေါက်စကို လေးဖက်ထောက်ခိုင်းပြီးခွေးလိုးလိုးရသည်မှာ အသံထွက်လှသည်။ဗြွတ်ဗြွတ်နှင့် သံစုံထွက်နေသည်။ ဒါကိုလည်း ဘိုးတော်မကြားနိုင်သူ့ေ၇ဒီယိုကြီးက ဖွင့်ထားသော ပဌာန်းကိုသာ သူကြားမည်။ ပေါက်စကို လိုးရသည်မှာ ကျွန်တော့်မိန်းမနှင့်မတူကြပ်သည်၊ အ၇ည်လည်းထွက်သည်။ ပိုကောင်းတာကတော့ ဖီလ်းကတခြားစီ။ ရင်ပိုခုန်သည်။ လိုးနေရင်းပင် ထပ်လိုးချင်နေမိတယ်။ ပေါက်စ၏ဆံပင်တွေကိုဆွဲစုရင်း အားပါးတ၇ဆောင့်မိတော့ပြီးသွားသည်ထင့် ပျော့ခွေကျသွားကာ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ဒီပုံစံက လုံးဝ PERFECT လေ။
ခါးလေးကိုကိုင်ကာ လဥတွေပါနာအောင် ဆောင့်မိတော့ ပြီးချင်ချင်ဖြစ်သွားသည်။ဒီတော့မှ လီးကိုဗြွတ်ခနဲ ဆွဲထုတ်ရင်း ပေါက်စကို ပက်လက်လှန်ကာ ဆဲပင်ဆွဲပြီး ပါးစပ်ထဲလီးထည့်ထားလိုက်သည်။ နေမကောင်း သောကြောင့်အာငွေ့နွေးနွေးလေးနဲ့တင်လွှတ်ချင်လွှတ်ချလို့ရသည် ။ခနထိန်းပြီးတော့ ပါးဘယ်ညာကို လီးထိုးရင်း လျာပေါ်မှာတင် ဗြစ်ခနဲ ထုတ်ချလိုက်တော့ တ၀ူးဝူးနဲ့ သူရုန်းသည်။ ခေါင်းကိုအတင်းဖိကပ်ရင်း အကုန်လုံးထုတ်ချလိုက်ပါတော့သည်။ End ။ ခရက်ဒစ်